အင်ဂျလီနာဂျိုလီ သာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးကြည့် သူ့ရုပ်ဘယ်လောက်လှလှ ဘာဖြစ်သွားမလဲ? - POPPIN NEW
အင်ဂျလီနာဂျိုလီ သာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးကြည့် သူ့ရုပ်ဘယ်လောက်လှလှ ဘာဖြစ်သွားမလဲ?
June 14, 2019 ဗဟုသုတ
အင်ဂျလီနာဂျိုလီ သာ မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးကြည့်… သူ့ရုပ်ဘယ်လောက်လှလှ Sexy ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် “အဲဒီကောင်မက ဆေးသုံးတာ” ” ငယ်ငယ်ကတည်းက အဖေက ပစ်သွားတာလေ… စာရိတ္တလည်း မကောင်းဘူး” စတဲ့ အပြစ်တင် အနိုင်ကျင့်စကားလုံးတွေကြားမှာ ကုလသမဂ္ဂ သံတမန်ဖြစ်လာဖို့ မပြောနဲ့…စိတ်ဓာတ်တွေ အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်ချိုးခံရပြီး ဆေးသမားဘဝနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်
အော်ပရာဝင်းဖရေးသာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ မွေးကြည့်… ကမ္ဘာကျော်ရုပ်သံ တင်ဆက်သူဖြစ်လာဖို့ဝေးစွ ” သူက အသက် ၁၃ နှစ်လောက်ကတည်းက အကြိမ်ကြိမ် မုဒိန်းကျင့်ခံရတာလေ” မသန့်ရှင်းတော့ဘူး… သူနဲ့မပတ်သတ်နဲ့” ” သူကို မယူနဲ့နော် … ဘယ်လိုအနေအထိုင်မတတ်လို့ ငယ်ငယ်က မုဒိန်းကျင့်ခံရလဲမှ မသိတာ” စတဲ့ မစာမနာ အထင်သေးကဲ့ရဲ့တဲ့ စကားတွေကြားမှာ လူမွှေးသူမွှေးတောင် ပြောင်မှာ မဟုတ်ဘူး…
နိုင်ငံခြားကို အဲဒီလိုနေရာတွေမှာ အထင်ကြီးတယ်… သူတို့ရဲ့ Growing Environment က သိပ်ကောင်းတယ်… လဲနေသူကို ထူပေးတယ်… မှားနေသူကိုလည်း အမှန်မြင်လို့ ပြန်ပြင်ရင် လူကောင်းအဖြစ်နဲ့ ပြန်လက်ခံပေးတယ်… အတိတ်က အရိပ်ဆိုးတွေကို ခဏခဏပြန်အစဖော်ပြီး စိတ်ဒုက္ခမပေးဘူး… ခုလက်ရှိ အချိန်မှာ သူဘယ်လို အကောင်းဆုံး ကြိုးစားရပ်တည်နေလဲဆိုတာကိုပဲ ကြည့်ကြတယ်… Positive Thinking… Positive View တွေနဲ့ပဲ ကူညီပေးကြတယ်…
မြန်မာနိုင်ငံက လူအများစုက သူတစ်ပါးကို အရမ်း Judgement လုပ်လွန်းအားကြီးတယ်… အဲဒီလို Judgement လုပ်နေရအောင် တရားသူကြီးတွေလည်း မဟုတ်ကြဘူး…
တကယ်လို့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုဖတ်ရသိရလို့ ကိုယ်တိုင်ပါဝင်မကူညီပေးနိုင်တောင် ကိုယ့်အတွက် အသိတရားတစ်ခုရယူပြီး ဒါမကောင်းဘူး… မဖြစ်သင့်ဘူး… ငါ့အလှည့်ကျမဖြစ်အောင် ဆင်ခြင်ရမယ်” လို့ တွေးတောတတ်ရင်ရပါပြီ…
ဝဋ်ဆိုတာကလည်း နောက်ဘဝမကူးဘဲ အခုဘဝမှာပဲ လည်တတ်တာမို့ အရိုးမရှိတဲ့လျှာလေးကို အသိ သတိလေးနဲ့ဆင်ခြင်ပီး သူတစ်ပါးအပေါ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချ ဝေဖန်တာမျိုးကို ရှောင်ရှားကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း…
Credit john Vinoth
အငျဂလြီနာဂြိုလီ သာ မွနျမာနိုငျငံမှာမှေးကွညျ့… သူ့ရုပျဘယျလောကျလှလှ Sexy ဘယျလောကျဖွဈဖွဈ “အဲဒီကောငျမက ဆေးသုံးတာ” ” ငယျငယျကတညျးက အဖကေ ပဈသှားတာလေ… စာရိတ်တလညျး မကောငျးဘူး” စတဲ့ အပွဈတငျ အနိုငျကငျြ့စကားလုံးတှကွေားမှာ ကုလသမဂ်ဂ သံတမနျဖွဈလာဖို့ မပွောနဲ့…စိတျဓာတျတှေ အကွိမျကွိမျ ရိုကျခြိုးခံရပွီး ဆေးသမားဘဝနဲ့ပဲ အဆုံးသတျသှားလိမျ့မယျ…
အျောပရာဝငျးဖရေးသာ မွနျမာနိုငျငံမှာ မှေးကွညျ့… ကမ္ဘာကြျောရုပျသံ တငျဆကျသူဖွဈလာဖို့ဝေးစှ ” သူက အသကျ ၁၃ နှဈလောကျကတညျးက အကွိမျကွိမျ မုဒိနျးကငျြ့ခံရတာလေ” မသနျ့ရှငျးတော့ဘူး… သူနဲ့မပတျသတျနဲ့” ” သူကို မယူနဲ့နျော … ဘယျလိုအနအေထိုငျမတတျလို့ ငယျငယျက မုဒိနျးကငျြ့ခံရလဲမှ မသိတာ” စတဲ့ မစာမနာ အထငျသေးကဲ့ရဲ့တဲ့ စကားတှကွေားမှာ လူမှေးသူမှေးတောငျ ပွောငျမှာ မဟုတျဘူး…
နိုငျငံခွားကို အဲဒီလိုနရောတှမှော အထငျကွီးတယျ… သူတို့ရဲ့ Growing Environment က သိပျကောငျးတယျ… လဲနသေူကို ထူပေးတယျ… မှားနသေူကိုလညျး အမှနျမွငျလို့ ပွနျပွငျရငျ လူကောငျးအဖွဈနဲ့ ပွနျလကျခံပေးတယျ… အတိတျက အရိပျဆိုးတှကေို ခဏခဏပွနျအစဖျောပွီး စိတျဒုက်ခမပေးဘူး… ခုလကျရှိ အခြိနျမှာ သူဘယျလို အကောငျးဆုံး ကွိုးစားရပျတညျနလေဲဆိုတာကိုပဲ ကွညျ့ကွတယျ… Positive Thinking… Positive View တှနေဲ့ပဲ ကူညီပေးကွတယျ…
မွနျမာနိုငျငံက လူအမြားစုက သူတဈပါးကို အရမျး Judgement လုပျလှနျးအားကွီးတယျ… အဲဒီလို Judgement လုပျနရေအောငျ တရားသူကွီးတှလေညျး မဟုတျကွဘူး…
တကယျလို့ အကွောငျးအရာ တဈခုဖတျရသိရလို့ ကိုယျတိုငျပါဝငျမကူညီပေးနိုငျတောငျ ကိုယျ့အတှကျ အသိတရားတဈခုရယူပွီး ဒါမကောငျးဘူး… မဖွဈသငျ့ဘူး… ငါ့အလှညျ့ကမြဖွဈအောငျ ဆငျခွငျရမယျ” လို့ တှေးတောတတျရငျရပါပွီ…
ဝဋျဆိုတာကလညျး နောကျဘဝမကူးဘဲ အခုဘဝမှာပဲ လညျတတျတာမို့ အရိုးမရှိတဲ့လြှာလေးကို အသိ သတိလေးနဲ့ဆငျခွငျပီး သူတဈပါးအပျေါပွဈတငျရှုတျခြ ဝဖေနျတာမြိုးကို ရှောငျရှားကွပါလို့ တိုကျတှနျးရငျး…
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ အပျို စစ်မစစ် ပြောလို့ရတယ်ဆိုတာ တကယ်ဟုတ်မဟုတ်(အသက်၁၈ပြည့်သူများသာဖက်ရန်)
Pop Pin New March 7, 2019
Pop Pin New May 21, 2019
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၂) ရက်နေ့ နယုန်လကွယ်နေ့… နေကြတ်မည်
Pop Pin New June 28, 2019